You are at:Home»2014»December (Page 5)
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-12 06:33:58
စစ်﻿တစ်﻿ပိုင်းအစိုးရ၏အမျိုးသားပညာ﻿ရေးဥပ﻿ဒေအားတစ်﻿နိုင်﻿ငံလုံးရှိနယ်﻿ခရိုင်﻿အသီးသီးတွင်﻿သပိတ်﻿﻿မှောက်﻿ဆန္ဒပြမှုများကြောင့်﻿ပုဒ်﻿မ(၁၈)ဖြင့်﻿တရားစွဲဆိုခံထားရ﻿သောဗကသ﻿ကျောင်းသားအ﻿ရေအတွက်﻿မှာယ﻿နေ့ထိ(၁၉)ဦးရှိသွားပြီဖြစ်﻿ပြီးပညာ﻿ရေးဥပ﻿ဒေသပိတ်﻿﻿မှောက်﻿ပွဲများသို့ဗကသ﻿ကျောင်းသားများနှင့်﻿အတူပူး﻿ပေါင်းပါဝင်﻿သပိတ်﻿﻿မှောက်﻿ခဲ့သဖြင့်﻿ပုဒ်﻿မ(၁၈)ဖြင့်﻿ပင်﻿တရားစွဲဆိုခံထားရ﻿သောတက်﻿ကြွလှုပ်﻿ရှားသူအ﻿ရေအတွက်﻿မှာ(၁၀)ဦးရှိသဖြင့်﻿စစ်﻿တစ်﻿ပိုင်းအစိုးရ၏အမျိုးသားပညာ﻿ရေးဥပ﻿ဒေ﻿ကြောင့်﻿တရားစွဲဆိုခံထားရ﻿သောနိုင်﻿ငံ﻿ရေးတက်﻿ကြွလှုပ်﻿ရှားသူဝန်းရံအင်﻿အားစုများနှင့်﻿ဗကသ﻿ကျောင်းသားများစုစု﻿ပေါင်းဦး﻿ရေမှာ(၂၉)ဦးရှိသွားပြီဖြစ်﻿ပါသည်﻿။ မင်း﻿သွေးသစ်﻿ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်﻿
သိမ်းပိုက်ခံလယ်ယာ ပြန်လည်ရရှိရေး ကသာမြို့မှာ ဆန္ဒပြ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ထီးချိုင့်မြို့နယ်မှာ ကုမ္ပဏီ ၇ ခုက သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ဥယျာဉ် ခြံမြေဧက တစ်သောင်း ခြောက်ထောင်ကျော်ကို ပြန်လည်ရ ရှိဖို့အတွက် တောင်သူလယ်သမား တစ်ရာကျော်က…
ရန်ကုန်မြို့၊ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ မဟာ ဗန္ဓုလပန်းခြံနံဘေးမှာ ၉ လနီးပါးဖွင့်ထား ခဲ့တဲ့ မိကျောင်းကန်သပိတ်စခန်းက ဆန္ဒပြ သူ ၁၀၀ ကျော်ဟာ ဆူးလေဘုရားနဲ့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ ဒီကနေ့…
“အရင်တုန်းက လေးပွင့်တောင်းတုန်းက ၁၄ ယောက်တွေ့သလိုလို၊ ဘာလိုလို။ နောက် ခြောက်ပွင်…
“အရင်တုန်းက လေးပွင့်တောင်းတုန်းက ၁၄ ယောက်တွေ့သလိုလို၊ ဘာလိုလို။ နောက် ခြောက်ပွင့်ဆိုင်၊ ခု ၁၂ ပွင့်ဆိုင်၊ အဲ့လို ဟာတွေလုပ်တာကတော့ ကျွန်မ အနေနဲ့ တကယ့်ဆွေးနွေးပွဲတွေ…
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ပထမဆုံးအကြိမ် ညီလာခံ…
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ပထမဆုံးအကြိမ် ညီလာခံကျင်းပမယ် ဟုဆို နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို စုပေါင်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ အားလုံးပါဝင်တဲ့ ညီလာခံတစ်ရပ်ကို…
ဖွံ့ဖြိုးရေးဂျာနယ် သတင်းထောက်တစ်ဦး ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားခံရမှု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေပြု ထုတ်ဝေသော ဖွံ့ဖြိုးရေးဂျာနယ်မှ အကြီးတန်းသတင်းထောက် တစ်ဦးကို စစ်တွေမြို့ ဆိပ်ကမ်း ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်…
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-11 14:24:23
Burmese Political Prisoners Speak Out In ‘Into The Current’ Documentary
On the eve of Burma’s historic vote,anew documentary gives voice to the men and women who bravely kept the flame of freedom alive during decades in jail.
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-11 08:14:27
Myanmar’s Exiles Want Clear Rules For Return
Three years after President TheinSein invited Burma’s exiles and refugees to return to the country, many say the government isn’t making it easy.
အပွင့်အရေအတွက် ဆုံးဖြတ်ပြီးလျှင် သမ္မတက လွှတ်တော်သို့ သ၀ဏ်လွှာ ပို့မည်ဟုဆို ======…
အပွင့်အရေအတွက် ဆုံးဖြတ်ပြီးလျှင် သမ္မတက လွှတ်တော်သို့ သ၀ဏ်လွှာ ပို့မည်ဟုဆို ====== ခြောက်ပွင့်ဆိုင်၊ ၁၂ ပွင့် ဆိုင်နှင့် ၁၄ ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေး နွေးမှု…
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-10 09:51:10
၆၆ ကြိမ်မြောက် လူ့အခွင့်အရေးနေ့အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှ ပေးပို့သော သ၀ဏ်လွှာ
၆၆ ကြိမ်မြောက် လူ့အခွင့်အရေးနေ့အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှပေးပို့သော သ၀ဏ်လွှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံတိုင်း မဖြစ်မနေ
ဗမာအစိုးရတပ်ဖွဲ့ နဲ့ ဒေသခံ TNLA တပ်ဖွဲ့ ကြား တိုက်ပွဲ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား
via ကယန်းတိုင်းစ် http://ift.tt/1D7QjFG http://ift.tt/1xHEmAv
http://aappb.org/bu/2014/12 အေအေပီပီမှ နိုဝင်ဘာလအတွက် နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များအပေါ်…
အေအေပီပီမှ နိုဝင်ဘာလအတွက် နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များအပေါ် သုံးသပ်တင်ပြချက်
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလကုန်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စုစုပေါင်း (၇၂) ဦး မြန်မာနိုင်ငံရှိ အကျဉ်းထောင်များအတွင်း ဆက်လက် ကျန်ရှိနေပြီး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၁၃၆ ဦးတို့သည် တရားရင်ဆိုင် နေကြရပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကုန်ဆုံးရန် လ တစ်လသာ ကျန် သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ သတင်းထောက်များ၊ လူ့အခွင့် အရေး ကာကွယ် စောင…
http://aappb.org/2014/12/aapp-monthly-chronology-for-november-2014/ AAPP Monthly…
AAPP Monthly Chronology for November 2014
AAPP | Assistance Association for Political Prisoners (Burma) » Blog Archive » AAPP Monthly…
Summary of the current Situation As of the end of November, 72 political activists remained in prison, while 136 are awaiting trial. With onlyamonth remaining in 2014, the situation faced by political activists, human rights workers, and journalists within Burma continues to be one of repression.…
ကချင်ပြည်နယ်တွင်း စစ်ရေးတင်းမာနေဆဲ အခြေအနေကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲနဲ့ လုံခြုံရေးအရ ကန့်သတ်တားဆီးမှုတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ကုလသမဂ္ဂ အပါအဝင် ပြည်တွင်းပြည်ပ အလှူရှင်တွေရဲ့ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီတွေ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေဆီ…
အမျိုးသားစာပေဆု လွတ်လပ်စွာရွေးချယ် ချီးမြှင့်နိုင်ပြီ
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေ တစ်သက်တာ ဆု၊ အမျိုးသားစာပေဆုနဲ့ စာပေဗိမာန် စာမူဆု ချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့က ရန်ကုန်မြို့ မြို့မကျောင်းလမ်းရှိ…
၂၀၁၄ ကရင့်ကြေးမုံမဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးတွင် ကေအဲန်ယူ ဥက္ကဌဟောင်း မန်းဘဇံပုံ ထည့်သုံး
ဒီဇင်ဘာ ၉ရက်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်။ စောထွန်းလင်း ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီ(မဟာရန်ကုန်)က ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ထုတ်ဝေသည့် ကရင်သက္ကရာဇ် ၂၇၅၄ခုနှစ်၊ ကရင့်ကြေးမုံမဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးအတွက် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး…
၁၂ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေး ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှာ အဆိုတင်သွင်း
နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုတွေ ပိုပြီး ပါဝင်နိုင်မယ့် ၁၂ ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပေးဖို့ ဒီကနေ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မှာ အရေးတကြီး အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေကတော့…
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-08 04:31:00
ရေတာရှည် လယ်သမား ၁၀၀ ကျော်အမှု NLD ကူညီနိုင်ရေး ဆွေးနွေး
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင် ၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်အတွင်းက တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ လယ်သမား ၁ဝဝ ကျော်အမှုကို လိုက်လံကူညီပေးဖို့ ရေတာရှည် အန်အယ်လ်ဒီရုံး မှာ ရေတာရှည်မြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ လယ်သမားမိသားစုဝင်တွေ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါတယ်။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-07 09:40:25
၄၃၆ ပြင်င်ဆင်ရေးလက်မှတ်ထိုး၍ ထောင်ကျသွားသည့် တပ်အရာရှိကို ပထမဆုံးအကြိမ်ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ရByအေးသူစံOn Sun, 2014၄၃၆ပြင်ဆင်ရေးလှုပ် ရှားမှုတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သ ဖြင့် ထောင်ဒဏ်၂နှစ်ချမှတ်ခံရသည့် ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်းအား မန္တလေးအိုးဘိုထောင်သို့ ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပြီးနောက် ဒီဇင်ဘာ ၅ရက် တွင် မိသားစုက ပထမဆုံးအကြိမ် ထောင်ဝင်စာတွေ့ဆုံခွင့်ရရှိခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၅ရက်က ပြင်ဦးလွင်စစ် တရားရုံးက တပ်မတော်အတွင်း ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဒေသန္တရအ မိန့် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက် နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်း ပုဒ် ၄၁(င) တပ်မတော်သားတစ်ဦးနှင့် မသင့်လျော်သောပြစ်မှုပုဒ်မ၆၅ စသည့်ပုဒ်မများဖြင့် ထောင်၂နှစ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖမ်းဆီးခံရပြီး ငါးလအတွင်း ယခုထောင်ဝင်စာမှာ မိသားစုက ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ခွင့်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်း၏ မိသားစုနှင့် နီးစပ်သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်းသည် အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တွင် တပ်မှူးအဖြစ်တာဝန်ထမ်း ဆောင်စဉ် ၂၀၁၄ခုနှစ် ဇူလိုင် ၇ ရက်က ပြင်ဦးလွင်သို့ တပ်တာဝန် ဖြင့်လာရောက်ရာ ပြင်ဦးလွင်အ မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ နှင့် ၈၈မျိုးဆက်ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့ အစည်းတို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင် နေသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၃၆ပြင်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည်။လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် ဇူလိုင် ၇ရက်တွင်ပင် ဖမ်းဆီးခံရ ပြီးနောက် ပြင်ဦးလွင်တပ်မတော် လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းကျောင်း၌ ဖမ်းဆီးချုပ် နှောင်ခြင်းခံရသည်။ သြဂုတ်လတွင် တပ်တွင်းခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးပြီး နောက် ဒီဇင်ဘာတွင် ထောင် ၂နှစ် ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိ ရှိရသည်။‘‘ထောင်ကျပြီဆိုတော့ တပ် အချုပ်ကနေ မန္တလေးအိုးဘို ထောင်ကိုရွှေ့ပေးတယ်။ အိုးဘို ထောင်မှာ မိသားစုနဲ့ နည်းနည်း ပါးပါးစကားပြောဆိုနှုတ်ဆက်ခွင့် ရတယ်။ ဖမ်းသွားပြီးကတည်းက ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ခွင့်ရ တာ။ ကျန်းမာရေးကတော့ ကောင်းပါတယ်။ သူကတော့ ပုဒ်မ ၄၃၆လက်မှတ်ထိုးလို့ထောင်ကျခံ ရတယ်လို့ပြောတယ်’’ဟု ဗိုလ်မှူး ၏ မိသားစုနှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်းစတင် ဖမ်းဆီးခံရသည့်သတင်းများထွက် ပေါ်စဉ် ပုဒ်မ ၄၃၆လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ၎င်း၏ပေါ့ဆမှုကြောင့် တပ်ကြပ် ကြီးတစ်ဦးသေဆုံးသွားသည့်အမှု အတွက် အရေးယူခြင်းဖြစ် ကြောင်း တပ်မတော်အရာရှိကြီး တစ်ဦးကပြောကြားခဲ့သည်။သို့ သော် ထိုပြစ်မှုမှာ ၂၀၁၃ခုနှစ်က တည်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်သက်ခံစား ခွင့်သုံးနှစ် လျှော့ချသည့်ပြစ် ဒဏ်ဖြင့် အရေးယူထားပြီးဖြစ် ကြောင်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကပြော သည်။ တပ်မတော်တွင် ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို လက်မှတ်မရေးထိုးရန် တား မြစ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း၊ သို့ သော် တပ်မိသားစုများအနေဖြင့် အထက်အဆင့်အကြီးအကဲများ ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လှုပ်ရှားမှု များတွင် ပါဝင်လေ့မရှိသည်မှာ အလိုအလျောက်လိုက်နာရမည့် တာဝန်တစ်ရပ်ကဲ့သို့ဖြစ်နေ ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောကြား သည်။တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ စည်း ကမ်းမဲ့မှု၊ အကျင့်စာရိတ္တချို့ယွင်း မှုကြောင့် တပ်မတော်တစ်ခုလုံး ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့်၊ စည်းရုံး ရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့်လုပ် ရပ်များမဖြစ်ပွားရအောင် အထူး အလေးထားဆောင်ရွက်သွားကြ ရန်လိုကြောင်း ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင် လှိုင်က ဒီဇင်ဘာ ၅ရက်က ပြုလုပ် သည့် စစ်တက္ကသိုလ်ဗိုလ်လောင်း သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅၆)သင် တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားမိန့်ခွန်း တွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ သည်။‘‘တကယ်တော့ သူက တပ် ကနေ ခံစားခွင့်သုံးနှစ်ထိထား တယ်။ နောက် ထွက်ခွင့်တင် တယ်။တပ်က ထွက်ခွင့်ကို ငြင်း ထားတယ်။ တကယ်တမ်းတပ်မှာ ပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမယ်လို့ ပြောထားပြီးသား။ ဒီညွှန်ကြား ချက်ရှိရက်နဲ့ တပ်ယူနီဖောင်းနဲ့ ပါတီတစ်ခုရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကိုသွား လက်မှတ်ထိုးရင် သေချာပေါက် အရေးယူခံရမယ်ဆိုတာသူသိပြီး သားပါ။ တပ်ရဲ့ ရိုးရိုးခွင့်မဲ့ပျက် ကွက်ရင်တောင်ထောင်တစ်နှစ်ချ လို့ရတယ်’’ဟု ယခင်တပ်မတော် သားဟောင်းတစ်ဦးက ပြော သည်။ အင်န်အယ်လ်ဒီနှင့် ၈၈တို့ ပူးပေါင်းသည့် ပုဒ်မ ၄၃၆ပြင်ဆင် ရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် အစိုးရ၀န် ထမ်းများ၊ တပ်မတော်သား၊ အောက်ခြေအဆင့်ဝန်ထမ်းအချို့ နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ ပါဝင်လက် မှတ်ရေးထိုးမှုများရှိခဲ့သော်လည်း ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်းတစ်ဦး တည်းသာ လက်ရှိအချိန်တွင် အ ရေးယူခံရခြင်းဖြစ်သည်။ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်းမှာ ထောင်၂နှစ်ချမှတ်ခံရချိန်တွင် တပ်မတော်သားအဖြစ်မှ ရပ်စဲ လိုက်သော်လည်း ၎င်း၏ စစ်မှု ထမ်းသက် ၁၄နှစ်၏ ပင်စင်ခံစား ခွင့်နှင့်လုပ်သက်လစာခံစားခွင့် များကို တပ်မတော်ကပေးအပ် မည်ဖြစ်ပြီး ထောင်ဒဏ်ကျခံနေ ချိန်တွင် ဇနီးနှင့်သားသမီးနှစ်ဦး ပြင်ပတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-06 09:40:03
ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ တရားစွဲထားတဲ့ လယ်သမား ၃၃ ဦးအမှု စတင်စစ်ဆေး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ သီလာမြိုင်ကျေးရွာက လယ်သမား ၃၃ ဦးကို မြန်မာ့စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်း ဦးပိုင်လီမိတက်က ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုနဲ့ တရားစွဲဆိုထားမှုကို ကျောက်တန်း မြို့နယ် တရားရုံးမှာ ဒီကနေ့ စတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။